Onye banyere akaụntụ email m? | Akụkọ akụrụngwa
Otu n'ime nchegbu kachasị anyị nwere ike ịnwe n'oge ọ bụla, dị n'ime ohere nke ịmara onye banyere na akaụntụ email m, Ọnọdụ nke bụ otu n'ime ihe ndị kachasị achọ na tontanetị iji gbalịa ime ka nzuzo na nchebe ya sikwuo ike.
Ọ dabara nke ọma maka ụfọdụ na ọ dị nwute maka ndị ọzọ, enwere ụzọ ụfọdụ ịmara ma ọ bụrụ na emebila akaụntụ anyị n'ụzọ ọ bụla; ma Yahoo na Gmail e nchegbu na ọnọdụ a, abụghị otu maka Hotmail (n'agbanyeghị nkwenye ya abụọ), bụ ndị a ka nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke mkpesa banyere ndị ọrụ furu efu na akaụntụ ha n'ihi na ndị ọzọ na-enweghị isi, abanyela ya, na-agbanwe kpamkpam ihe niile dị n'ime (ọkachasị paswọọdụ na ajụjụ nzuzo). N'isiokwu a, anyị ga-egosi ntuziaka ole na ole ị nwere ike ịme n'oge ọ bụla (na Yahoo na Gmail) ịmara onye banyere akaụntụ email gị.
1 Mara onye banyere na akaụntụ email m Yahoo!
2 Mara onye banyere akaụntụ email m na Gmail
Mara onye banyere na akaụntụ email m Yahoo!
Ọ bụrụ na ajụjụ dị ugbu a ị nwere "mara onye banyere akaụntụ email m si Yahoo », n'okpuru n'okpuru anyị ga-ekwupụta usoro ole na ole ị ga - agbaso ka ị nwee ike ijide n'aka na nzuzo email gị. Iji mee nke a, na site na usoro usoro ole na ole (dịka anyị jirila ọtụtụ isiokwu) anyị ga-egosi ihe ị ga - emerịrị iji nwee ike ịrụ ọrụ a:
Mbụ anyị na-abanye na akaụntụ email anyị na nwoke nzere (aha njirimara na paswọọdụ).
Ka anyị gbalịa ịlele ma ọ bụrụ na ụdị ọrụ enyo ọ bụla enweela na igbe akwụkwọ ozi (kwa, na egweri bin).
Mpaghara Spam nwekwara ike ịnye anyị ụfọdụ ozi, ebe enwere ike ịpụta peeji ndị anyị na-edeghị aha.
Mgbe ahụ, ị ​​ga-pịa ntọala (akara ngosi gia nke dị n'akụkụ elu aka nri).
Site na nhọrọ egosiri anyị họrọ «Nzuzo».
Anyị ga-awụli ozugbo na ihe nchọgharị ọzọ.
N'ebe ahụ, anyị ga-etinye paswọọdụ ịnweta anyị ọzọ.
Na gburugburu ebe a, anyị na-aga na mpaghara "Nbanye na Nche".
Site na nhọrọ ndị dị ebe ahụ, anyị na-ahọrọ nke na-ekwu «Ele Nbanye Ọrụ".
Anyị ga-awụlikwa elu na interface ọhụrụ n'ime windo ahụ.
Ọ bụ na mpaghara a ka anyị ga-elekwasị anya maka oge ahụ; ebe a anyị nwere ike na-enwe mmasị n'ụzọ zuru ezu, ihe si ọrụ anyị nwere. Ogidi dị iche iche ga-anọ ebe ahụ, ebe:
Ofdị ihe nchọgharị.
Dị ohere dị iche iche.
Ọ bụ ihe ị nwere ike ịmasị na nke ọ bụla n'ime ogidi ndị a; nke ikpeazu bu nke kachasi mkpa n’ime ha, ebe onwere obere akara adaala, nke bu n’inye anyi uzo nke uzo ozo di iche iche anyi nwere (ma obu ndi ozo mere n’enweghi ikike anyi) Nhọrọ iji chọpụta adreesị IP anyị dị. Ọnọdụ ahụ dị ezigbo mkpa, mana onye ọzọ nwere ike ibi anyị nso, ihe a ga-ekpughere ma ọ bụrụ na adreesị IP nke egosipụtara na nke ọ bụla na-eme dị iche na nke ndị na-eweta ọrụ anyị na-enye.
N'akụkụ ikpeazụ nke isiokwu a, anyị ga-ahapụrụ gị njikọ njikọ nke ị ga-aga ka ị nwee ike itinye nzere gị, wee chọọ ịga mpaghara a nke anyị kọwara n'ụzọ zuru ezu.
Mara onye banyere akaụntụ email m na Gmail
Iji nwee ike saber onye banyere akaụntụ email m Na Gmail, ọnọdụ ahụ dị mfe karịa ihe anyị kwuburu na Yahoo; ebe a ọ ga-ezu iji banye email akaụntụ anyị na nwoke nzere (aha njirimara na paswọọdụ) wee gaa na ala nke ihuenyo.
N'ebe ahụ, anyị ga-ahụ otu nhọrọ na-ekwu "Ozi zuru ezu«, Nke anyị ga-pịa iji weta a ọhụrụ sere n'elu window. Ọ ga-egosi ihe yiri nke Yahoo na-enye anyị, ya bụ, ọtụtụ ogidi na nkọwa nke ihe nchọgharị nnweta, adreesị IP, ọnọdụ na oge (ma ọ bụ oge) anyị abanyela.
Ozi ndị ọzọ - Nkwenye ugboro abụọ rutere akaụntụ Microsoft
Njikọ: Nkwenye Yahoo
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Aghụghọ ịmata onye banyere na akaụntụ email m